चितवनको बुद्द्दि दराई एक महीना देखी सम्पर्क बिहीन खोजिदिन परिवारको आग्रह : plz share गरिदिनु होला है
खैरहनी । पुर्वि चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १२ का एक पुरुष सम्पर्क विहिन भएका छन् । खैरहनी १२ घोक्रेला घर भएका बुद्धि दराई नामबाट बोलाईने नागरिकता अनुसार सुनिल दराई नाम गरेको ४१ बर्षका पुरुष असार ३० गते देखी बेपत्ता भएका हुन् । हराएको एक महिना बितिसक्दा पनि घर नर्फिएपछी उनको परिवारले खोजिदिन आग्रह गरेको छ ।
निजका श्रिमती आज (बुधबार) सुमि दराई ग्रेट एफ.एमको कार्यलयमा आएर खोजिदिन आग्रह गरेकी हुन् । उनले बेला बेलामा सामान्य मनमुटाव भईरहने बताईन् । उनका अनुसार गत असार १७ गते पनि सामान्य पारिवारिक मनमुटाव भएको थियो । उनले श्रिमान हराए देखी धेरै फोन प्रयास गर्दा पनि फोन नलागेको बताईन् ।
५ बर्ष विदेश बसेर आएका दराईको दुई छोरीहरु र एक छोरा रहेका छन् । दराईलाई देख्नुहुने जो कोहीले नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा परिवारको सम्पर्क नं. ९८२७२५०७२४ अर्थात ग्रेट एफ.एमको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।
२०७८ भाद्र ३, बिहीबार प्रकाशित0Minutes 259 Views